10/12/2017 03:49:00 PM
sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya Kuita zvinopesana nemvura: Nokudana (kusasimudza), mutambi anopa chero vapikisi vese kuti vaite shure kwavo pombi yakanakisisa inopesana kuti iite zvakare. Somuenzaniso, kana mutambi ane ruoko rwakasimba kwazvo, runhare runogona kukurudzira vadzivisi vadzo shure kwavo kuti vapedze kana kutosimudza, kuvaka chikafu. Kunyanya mumitambo yemiganhu, kuvaka chivako mukutengesa kwepakutanga kunogona kukurudzira vapikisi kudana mabheji emangwana gare gare kutengesa mabhadharo nekuda kwekavha yavanenge vachiwana. Kugadzirisa bluff pakushambadzira kwekupedzisira: Dzimwe nguva dzinonzi bluff refu, kudana kutengesa kwepakutanga kunogona kuisa bluff (kana semi-bluff) pane imwe nguva paya kutengesa. Semuenzaniso, mutambi ane ruoko rwakasimba rwekutanga angadaidza panzvimbo panzvimbo yekusimudza kuti aone kuputika zvishoma. Izvo zvinenge zvisingabatsiri mutambi, asi mutambi angave ane zvizhinji "kunze" (makadhi akasiyiwa kugadzirisa anogona kuita ruoko rune simba), kana kunyange kana maitiro akaderera iwo angaedza bluff.
Nokusimudza, chiitiko ichi chinogona kuonekwa kune anopikisa semutambi uyo "akazununguka" neruoko rwekutanga rwakakosha, asi mushure mokunge ikoka iko zvino rine simba rakagadzirwa kana kuti rinotora. Izwi rekutsvaga rekutsvaga kwe "bluffing refu" riri kufamba. Chirevo chepfungwa chinotaura kuti mutambi anoda ruvoko rwuri nani kutamba nemumwe munhu atovhura (kana kuti akamutsa) kubheta kupfuura zvaaida kuti azvizarure. Chirevo chepfungwa chinoratidza kuti vatambi vanosarudza kudzivisa kupikisana nevamwe vatambi avo vakatotaridza simba, uye iyo inoshevedza ine nzira imwe chete yekukunda (nokuva neruoko rwakanakisisa), asi kuzarura kunogonawo kukunda pakarepo kana muvengi wako akadzika. Zvine chokuita nemigumisiro yegap, inoitika sandwich inotaura kuti mutambi anoda ruoko rwakasimba kuti arambe ari muhari kana pane vadzivisi vasati vaite shure kwavo. Nemhaka yokuti mutambi wacho haazive kuti vangani vanopikisa vachabatanidzwa muhari kana kuti angazofanira kudanazve kusimudza, haazive kuti mvura yake inogadzirisa inopesana chii chaizvoizvo. sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya